Filed under: ကဗျာရှည် —6Comments
ကမ္ဘာဦးထဲမှာ “ကျောက်ခေတ်ဘီယာခရားများ”* လဲလျောင်းနေ၏။
သူမ ကနဦး ဘယ်ကစလို့…..၊ ဘယ်ကလာ……
သူမ အစ ပါရှားကတဲ့… ဒါလည်း ဖြစ်နိုင်သည်
သူမ အစ အီဂျစ်ကတဲ့…ဒါလည်း မှန်နိုင်သည်
သူမ အစ ဂရိကတဲ့…. ဒါလည်း ထောက်ခံသည်
သူမ အစ တရုတ်ကတဲ့… ဒါလည်း နီးစပ်သည်
သူမ အစ အိန္ဒိယကတဲ့… ဒါလည်း အလားအလာရှိသည်
သူမ အစ ရောမကတဲ့…..
သူမ အစ ဘေဘီလုံကတဲ့….
သူမ အစ ….သုရာနတ်ပြည်ကတဲ့…..
သူမ အစ …..
အိုကွယ်…. သူရာနတ်သမီးရေ စချင်သလိုသာ စပါတော့။
အခြား…. ခြားသော ဝိသေသနများနှင့်
ဘာအရည်ဖြစ်ဖြစ် သောက်လို့မူးလာရင်တော့ “သူရာမေရိယ”….ပါပဲ။
ကျမ်းဂန်လာ “သုရာ= ချက်ရည်”ဟု ငါးမျိုး ဖွဲ့ဆို၏။
“မေရိယ(ဝါ) စိမ်ရည်” ဟု ငါးမျိုးရှိ၏။
>ကိုလင်း …သူရာ ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ ဆီက သူရသတီ မယ်တော်ဆိုတာကို ပြောကြည့် ချင်တယ်နော်။ သူလည်း တကယ်မရှိပါဘူးတဲ့ ။ လူတွေက ပိတိကတ် သုံးဘုံကို စောင့် ဘို့ ဖန်တီး ထားခဲ့ တာလို့ဆိုပါတယ်။ ဘာသာတိုင်းမှာ ကိုယ်လိုရာကို စိတ်ကူးပုံဖော် ဖန်ဆင်းတာတွေရှိနေပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ဘာသာကတော့အနည်းဆုံး လို့ ထင်ပါတယ်။ ပို့ (စ) နဲ့ဆိုင်ပါ့ မလားမသိ။ပြောချင်ရာ ပြောခဲ့ ပြီနော…။
>သူရဿတီဆိုတာ အပြင် ၃၇ မင်း အတွင်း အတွင်း ၃၇ မင်းမှာ သူက အပြင် ၃၇ မင်းမှာပါတယ်ဗျ ပါချင်တဲ့နေရာပါဗျာ ကျွန်တော်ကတော့ မယုံဘူး လှိုင်ဘွာ(သီချင်းအိမ်)မှတ်ချက် ။ ။သူရနတ်သမီးအားသောက်လို့ ရပါသလားဘာပဲပြောပြော သူရာရေ တည်ထွင်ခဲ့သူများကိုကျေးဇူးတင်၏အဘယ်ကြောင်းဆိုသော်ယခု ဘရန်ဒီသောက်ပြီး ကွန်မန့် ရေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေသည်။ခင်မင်လျက်.. 🙂
>အစ်ကိုချမ်းလင်းနေရေ အစ်ကိုအစဖော်လို့ လား ဒါမှမဟုတ် တရုတ်နှစ်ကူးနဲ့ များတိုက်ဆိုင်လို့ လား သူရာအရက်ကြောင်းတွေတော်တော်များများ ကွန်မန့် တတ်လာတယ် .. နော်. ..ကျွန်တော်အပါအဝင်ပေါ့ ကိုဇော်ကလည်း ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ ဆိုပြီး ထပ်လုပ်ချလိုက်သေးရဲ့ အခုမှ သူ့ အကြိုက် ကိုယ့်အကြိုက်တွေပေါ်ကုန်ပြီ . .ဟေးဟေး
>ကျွန်တော်ရဲ့ ဒီပိုစ်အောက်က ကွန်မာန့်လေးတွေမှာ ဘာဖြစ်မှန်းမသိပဲ Malware တွေ ဖြစ်သွားလို့ နမြောတသစွာနဲ့ပဲ ဖြုတ်ပြစ်လိုက်ရပါတယ်။ ကွန့်မာန့်ပေးခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေအပေါင်းကိုလည်း စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲ ကွန်မာန့်လေးများ ဖြုတ်ပြစ်လိုက်ရတာ ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါလို့ တောင်းပန်ချင်ပါတယ်။